infographic: Tirakoob Cusub oo soo Bandhigaya Khasaaraha Dhimasho Ee Ciidamada Mareykanka Ee Afghanistan 30 Maalmood Gudahood.
Sunday September 24, 2017 - 10:16:50 in Wararka by Super Admin
Xarakada islaamiga Taliban ayaa sare u qaadday howlgallada ka dhanka ah ciidamada shisheeyaha Mareykanka iyo maleeshiyaadka xukuumadda dabadhilifka Afghanistan.
Tirakoob ay soo saartay xarunta daraasaadka NORS ayaa muujinaya khasaaraha lixaadka leh ee ciidamada Mareykanka iyo kuwa dowladda Afghanistan kasoo gaaray weerarada Taliban ay ka fulisay inta badan 34-ta gobol ee uu ka koobanyahay wadankaasi.
Tirakoobka ayaa lagu sheegay in weeraro ka dhacay Afghanistan intii u dhaxaysay 23,Augst,2017 illaa 20,September 2017 ay gaarayeen 548 weerar oo isugu jiray weeraro naf-hurnimo,dagaallo toos ah iyo qaraxyo , waxaana ay si isku mid ah loogu beegsaday ciidamada Maraykanka ee jooga dalka Afqaanistaan iyo malleeshiyaadka Xukuumadda Kaabul.
Khasaaraha dhimasho ee ciidamada Mareykanka kasoo gaaray weerarada 30-ka maalmood ayaa lagu sheegay 32 Askari dhimasho ah iyo dhaawaca 14 askari.
Malleeshiyaadka Xukuumadda Afghanistan looga dilay weeraray ayaa tirakoobka lagu sheegay 1069 Askari oo dhimasho ah, iyo dhaawaca 624 Askari.
Xarunta Daraasaadka NORS waxay sheegtay in dagaalyahanada Taliban ay bishii Agusts iyo bishan September ay burburiyeen 3 Diyaaradood oo ay ku jirto mid Drone ah, iyadoona burburka diyaaradahaas ay gacanta ku dhigeen ciidamada Xarakada Taliban.
Gaadiidka dagaalka ee ciidamada Taliban ay ka gubeen ciidamada Mareykanka iyo maleeshiyaadka xukuumadda ayay daraasaddu ku sheegtay 198 Gaari oo isugu jira noocyada kala duwan ee gawaarida ay isticmaalaan Milliteriga.
Tirakoobkan soo baxay ayaa muujinaya sida imaarada Islaamiga Afghanistan u dardar gelisay howlgallada ka dhanka ah cadawga jinsiyadaha kala duwan leh xilli hoggaamiyaha Mareykanka Donald Trump uu dhawaan sheegay in ciidamo gaaraya 3000 oo askari ay ku kordhiyeen ciidamadiisa ka dagaallamaya wadanka Afghanistan waxayna Taliban ku Hanjabtay in Afghanistan isku bedeli doonto Qabuuraha ciidanka Mareykanka.